bilisummaa - Oromia Shall be Free
Raayyaan Ittisa Biyyaa daangaa humna waraanaa Sudaaniin qabame bilisa gochuuf gahuumsa qabaachuufi qophii barbaachisu hunda taasisuu beeksiseera. Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa haala nageenyaafi haleellaa humni …
Godaantoota Libiyaa keessatti danqamanii jiran Amerikaa kaabaa fi Awurooppaa dabalatee biyyonni nagaa qaban eeguumsa akka taasiisan gareen Doktooroota Daangaan hin uggurre gaafatee jira.Kana malees kanneen …
Maaltu dhibee kanaaf nama saaxila? 1. Saalan dubara ta’uu, 2. Furdina garmalee, 3. Ulfaa’uu, 4. Umuriin dabaalaa deemuu, 5. Yeroo dheeraaf dhaabbachaa turuu. Kunis, yeroo …
BBC Afaan Oromoo Waraanni bilisummaa Oromoo (WBO) kan mootummaan ‘ABO-Shanee’ jechuun paarlaamaan shororkeessummaan faraje, erga bulchiinsa Abiy Ahimad waliin wal waraanuu eegalee amma waggoonni sadii …
Komii warra hajjii baranaa: Majlisa Oromiyaas tahee ka duraanii ummata saamuu fii malee, ummata tajaajiluuf hin dhabbanne jedhu hujjaajoonni. Qarshii kuma dhibba lamaa fii afurtama …
tiinii Faaydaa yookiin bu’aa tiinii/shookaa kana beeytuu laataa?1. Akka qorannoon agarsiisutti, warra dhibee sukkaraa gosa 2ffaa qabaniif hedduu gargaarti. Sababni, sukkaara qaama keessaa gadi buusuuf …
In these zones, people who do not support the government’s political views, youths who are not youth of the change(not supporters of the government), members …
Mana maree dhimmoota Islaamummaa Toophiyaa (ce’umsaa) irraa haleellaa namoota nagaa irra ga’aa jiru ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenname Maqaa Rabbii akkaan mararfataa akkaan rahmata godhaa ta’eetiin …
Cunfaa haxeerarrii dubbii obboo Jawaar Mohammadii fii obboo Baqqalaa garbaa imala galatoomaa Minisoottaa ffaa imala kana keessa waan hedduutu jira Sadarkaa Sochii qabsoo Oromoo irra …